ကြည့်ရှု သူတွေကို ရင်ခုန်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ရွှေရင်အစုံ လေးတွေပေါ်လွင် နေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ကြည့်ရှု သူတွေကို ရင်ခုန်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ရွှေရင်အစုံ လေးတွေပေါ်လွင် နေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေး
ကြည့်ရှု သူတွေကို ရင်ခုန်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ရွှေရင်အစုံ လေးတွေပေါ်လွင် နေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေး
အဆို တော် ပိုပို က တော့ အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို အချိန်တွေ အကြာကြီး လုပ်ကိုင် လျက်ရှိ နေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး မြင်ရသူတိုင်း ကို အချစ် ပိုစေတဲ့ ချစ် စရာကောင်း လွန်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမကတော့ အချိုး အစားပြေပြစ် ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ကောက် ကြောင်း အလှ တရား ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှု ရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကိုပါ ရရှိထားသူ တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
ဖက် ရှင် လန်းလန်း လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိတဲ့အပြင် မြန်မာ ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေး တွေကိုလည်း ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိတဲ့ သူမ က တော့ သီချင်း အသစ် လေးတွေ ကို ထွက် ရှိ ထားတဲ့ အပြင် နောက်ထပ် သီချင်း အသစ်လေး တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ရှေ့ချပြဖို့ ကြိုးစားလျက်ရှိ နေတာဖြစ်ပါတယ် ။ သူမ က တော့ ယခု မှာ” အပျိူ ကြီး လို့ ပရိတ်သတ် တွေက ချစ်စနိုး နဲ့ ခေါ်ကြ တယ် အဲ့လို ခေါ်တာလေး ကိုလဲ “မ “ က ချစ် တယ် မင်းတို့ ရဲ့ အပျိူ ကြီး မတ် မတ် ပို “ဆိုပြီး အနီရောင် ဖက်ရှင်လေး နဲ့ လှပနေ တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို တင်ပေးလာခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါ တယ် ။
လွတ် လပ် ပေါ့ပါးစွာ ပြောဆို နေထိုင် တတ်တဲ့ သူမ က တော့ ယခုမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိ တဲ့ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေ လောက်အောင် အသည်းယား စရာအမူအရာလေးလုပ် ပြနေ ခဲ့ပါတယ် ။ ချစ်ပရိသတ် တွေ အတွက် အဆိုတော် ပိုပိုရဲ့ ရင်ခုန် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အလှတရား တွေပေါ်လွင် နေတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင် လေး ကို ပြန် လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပြီး အဆိုပါ ဆွဲဆောင် မှုရှိလွန်း တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်လေးကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင် ပါ တယ် ။
source : PO PO ‘ s iG acc My day
အဆို ေတာ္ ပိုပို က ေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို အခ်ိန္ေတြ အၾကာႀကီး လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိ ေနသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ျမင္ရသူတိုင္း ကို အခ်စ္ ပိုေစတဲ့ ခ်စ္ စရာေကာင္း လြန္း တဲ့ အျပဳံးေလး ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သူမကေတာ့ အခ်ိဳး အစားေျပျပစ္ ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ တရား ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ေၾကာင့္ မိန္းကေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အားေပးမႈ ေရာ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကိုပါ ရရွိထားသူ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ဖက္ ရွင္ လန္းလန္း ေလးေတြ ကို ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိတဲ့အျပင္ ျမန္မာ ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ေလး ေတြကိုလည္း ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိတဲ့ သူမ က ေတာ့ သီခ်င္း အသစ္ ေလးေတြ ကို ထြက္ ရွိ ထားတဲ့ အျပင္ ေနာက္ထပ္ သီခ်င္း အသစ္ေလး ေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြ ေရွ႕ခ်ျပဖို႔ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိ ေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။ သူမ က ေတာ့ ယခု မွာ” အပ်ိဴ ႀကီး လို႔ ပရိတ္သတ္ ေတြက ခ်စ္စနိုး နဲ႔ ေခၚၾက တယ္ အဲ့လို ေခၚတာေလး ကိုလဲ “မ “ က ခ်စ္ တယ္ မင္းတို႔ ရဲ့ အပ်ိဴ ႀကီး မတ္ မတ္ ပို “ဆိုၿပီး အနီေရာင္ ဖက္ရွင္ေလး နဲ႔ လွပေန တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို တင္ေပးလာခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါ တယ္ ။
လြတ္ လပ္ ေပါ့ပါးစြာ ေျပာဆို ေနထိုင္ တတ္တဲ့ သူမ က ေတာ့ ယခုမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ တဲ့ အလွတရားေတြ ေပၚလြင္ေန ေလာက္ေအာင္ အသည္းယား စရာအမူအရာေလးလုပ္ ျပေန ခဲ့ပါတယ္ ။ ခ်စ္ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ အဆိုေတာ္ ပိုပိုရဲ့ ရင္ခုန္ စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ အလွတရား ေတြေပၚလြင္ ေနတဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယိုဖိုင္ ေလး ကို ျပန္ လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ၿပီး အဆိုပါ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိလြန္း တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္ေလးကို ေအာက္မွာ ၾကည့္နိုင္ ပါ တယ္ ။
Previous post ကြည့်ရှု သူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ဗြောင်းဆန် သွားစေမယ့် မမဆောင်း ရဲ့ အသဲယား စရာ ဗီဒီယိုလေး
Next post စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ ကြည့်မိသူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ထိန်းမရအောင် ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် အလန်းစားပုံများ